Gadzira yako wega fetiraiza kumba
Kana pamba pakagadzirwa fetiraiza, manyowa emanyowa anokosha.
Composting inzira inoshanda uye ine mari yekurasa tsvina yemombe
Kune matatu marudzi emirwi mhando: yakatwasuka, semi-gomba, uye gomba
Inokodzera tembiricha yakakwira, mvura, mwando wakakwirira, nzvimbo dzakakwirira dzematafura emvura. Sarudza nzvimbo yakaoma, yakavhurika, uye padyo nenzvimbo dzinowanikwa mvura. Kuisira upamhi hwe 2m kukwirira 1.5-2m kureba kunogoneswa zvinoenderana nehuwandu hwezvinhu zvakagadzirwa. Simbisa ivhu usati warongedza uye vhara yega yega neta yezvinhu nehuswa hwehuswa kana turf yekumwisa seepage muto .. Imwe nhete iri 15-24cm gobvu. Wedzera huwandu hwakaringana hwemvura, lime, sludge, mutsvina, nezvimwewo pakati pematanho ekuderedza kubuda kwemhepo uye ammonia volaculation. Mushure memwedzi mumwe wekugadzira manyowa, fambisa dumper yekufamba kuti ushandure manyowa uye ugare uchitenderedza murwi kusvikira zvinhu zvacho zvaora. Huwandu hwemvura hwakakodzera hunodiwa zvichienderana nehunyoro kana kuoma kwevhu. Iyo composting rate inosiyana nemwaka, kazhinji 3-4 mwedzi muzhizha mwedzi miviri uye 3-4 mwedzi muchando. .
Hafu gomba mhando
Inowanzo shandiswa mukutanga kwematsutso nechando. Sarudza nzvimbo yakarara-pasi kuti uchere gomba rakadzika-pamamita maviri-mashanu nemashanu pakureba uye nemamita masere pakureba. Muchinjiko mavhesi anofanirwa kumisikidzwa pazasi uye madziro egomba. Wedzera 1000 kg yemashanga akaoma pamusoro pemupfudze woisa chisimbiso nevhu. Mushure mevhiki yekuisa manyowa, tembiricha inokwira. Uchishandisa dumper yakadzvanywa, shandura iyo yekuvirisa reactor zvakaenzana pamusoro kwemazuva mashanu mushure mekupora, uye ramba uchiita kompositi kusvikira iyo mbishi yaparara zvachose.
Kazhinji 2 metres yakadzika, inozivikanwawo sepasi pevhu mhando. Iyo yekuisira nzira yakaenzana nehafu-gomba nzira. Shandisa kairi hesi dumper panguva yekuora kuti zvinhu zviwedzere kusangana nemhepo.
Kupisa kwakanyanya anaerobic composting.
Kompiresa yekupisa-yepamusoro inzira huru isingakuvadzi yekurasa marara ehupenyu, kunyanya tsvina yemunhu. Zvinhu zvinokuvadza zvakaita sebhakitiriya, mazai uye mbeu yehuswa mumashanga uye tsvina zvinourawa mushure mekurapa kwekushisa kwakanyanya. Yakakwira tembiricha anaerobic composting inzira mbiri, yakati sandara murwi mhando uye semi-gomba mhando. Unyanzvi hwekugadzira manyowa hwakaenzana newemanyowa chaiwo. Nekudaro, kuitira kuti ikurumidze kuora kwehuswa, tembiricha yakakwira inofanira kuwedzera yakanyanya tembiricha yeselulose kuora mabhakitiriya, uye kumisikidza michina yekupisa. Matanho eantifreeze anofanirwa kutorwa munzvimbo dzinotonhora. High-tembiricha composting inopfuura nemumatanho akati wandei: kupisa-kukwirira-kutonhora-kuora. Zvinhu zvinokuvadza zvichaparadzwa patembiricha yakakwira. Zvingave zvakanaka kana iwe uine chaiyo simenti kana mataira composting nzvimbo.
Chinhu chikuru: nitrogen.
Sub-zvinoriumba: phosphorus, potasium, simbi.
Inonyanya kushandiswa muitrogen fetiraiza, yakadzika fungidziro, isiri nyore kukonzera kukuvara kumidzi system. Izvo hazvina kukodzera kushandiswa kwakanyanya panguva yemaruva mhedzisiro. Nekuti maruva nemichero zvinoda yakawanda phosphorus, potasium, sarufa.
Mbishi zvigadzirwa zveimba yekugadzira fetiraiza.
Isu tinokurudzira kusarudza anotevera madanho senge mbishi zvigadzirwa zveimba yekugadzira fetiraiza.
1. Dyara mbishi zvigadzirwa
Mumaguta makuru muUnited States, hurumende inobhadhara vashandi vanonhonga mashizha anodonha. Kana manyowa achikura, anotengeswa kuvarimi nemitengo yakaderera. Kunze kwekunge iri munzvimbo dzinopisa, zvakanakisa kugadzira yega yega yega yemashizha asingasviki masendimita mashanu kusvika ku10, mashizha akapfava ari pasi pehupamhi hwemasendimita anodarika makumi mana. Iyo nguva iri pakati pematanho akasiyana emashizha anodonha inoda kufukidzwa neakawanda seivhu, iro rinogona ~ kutora mwedzi mitanhatu kusvika gumi nemiviri kuti riore. Chengetedza ivhu rakanyorova, asi usariwedzere-kudiridzira kudzivirira kurasikirwa kwevhu kwevhu.
Kana michero iri kuora, mhodzi, mapundu, maruva, nezvimwe zvichishandiswa, kuora kunogona kutora nguva yakati rebei. Phosphorus, potasium nesarufa zvakakwirira.
Keke yebhinzi, bhinzi curd, nezvimwe
Zvichienderana nemamiriro ekudonha, manyowa anotora mwedzi inosvika mitatu kana mitanhatu kuti ibve. Nzira yakanakisa yekumhanyisa kukura ndeyekuwedzera utachiona. Imwe yemaitiro ekugadzira manyowa ndeyekuti hapana hwema zvachose. Iyo phosphorus, potasium uye sarufa zvirimo zvakakwirira pane izvo zvekusvaira manyowa, asi zvakaderera pane izvo zvemuchero manyowa. Compost inogadzirwa yakananga kubva kune soy kana zvigadzirwa zve soy. Soybeans inotora nguva yakareba kuita manyowa nekuda kwehuwandu hwemafuta. Kune shamwari dzinogadzira mafuta ehupenyu, zvinogona kunge zvichinhuhwa gore kana makore kubva ikozvino. Naizvozvo, tinokurudzira kuti ma soya anyatso kubikwa, aiswe charred, wozonyoroveswa. Inogona kudzikisa zvakanyanya kuiswa kwenguva.
Tsvina yemakwenzi anoita semakwai nemombe anokodzera kuvirisa nekugadzira fetiraiza yehupenyu. Uye zvakare, mupfudze wehuku uye hangaiwa yenji phosphorus zvirimo zvakakwirira, zvakare isarudzo yakanaka.
Cherekedza: tsvina yemhuka inogadziriswa uye ichishandiswazve pachigadziko chakajairika inogona kushandiswa sechinhu chisina kugadzirwa chefetiraiza. Nekudaro, nekuda kwekushomeka kwemidziyo yekugadzira yepamusoro mumba, hatikurudzire kushandisa tsvina yemunhu sezvinhu zvakagadzirwa kugadzira fetereza.
3. Natural Organic Fertilizers 'Ivhu Rekudya
Zvepabonde: Inoberekerwa, asi yakakwira viscosity. Inofanirwa kushandiswa seyakagadzika fetiraiza, kwete yega.
Pine tsono mudzi
Kana iwo hukobvu hwakadzikira hwanyanya kupfuura 10-20cm, iyo tsono yepaini inogona kushandiswa senge mbishi zvinhu zve organic fetiraiza. Nekudaro, iwe haugone kushandisa iyo.
Miti ine yakadzika resini yezvinyorwa, senge inodonha feather fir, ine mhedzisiro.
Fetiraiza inoshanda zvakanyanya. Nekudaro, iyo haigone kushandiswa zvakananga uye inogona kusanganiswa nezvimwe zvakasikwa zvinhu.
Icho chikonzero nei organic chinhu ichifanira kuve yakaora zvachose.
Kuora kwezvinhu zvakasikwa kunotungamira kune mbiri huru shanduko kuburikidza nema microbial chiitiko: kuora kwezvinhu zvakasikwa kunowedzera zvinovaka muviri fetereza. Kune rimwe divi, iyo organic chinhu yezvinhu zvakasvibirira yakanyoroveswa kubva kune yakaoma kusvika pakapfava, uye iyo maratidziro anochinjwa kubva mukusaenzana kuenda kuunifomu. Mukuita manyowa, inouraya mbeu dzesora, mabhakitiriya, uye mazai mazhinji. Naizvozvo, zvinowirirana zvakanyanya nezvinodiwa mukugadzirwa kwekurima.